R/Wasaare Khayre oo kormeeray Xabsiga Dhexe ee Xamar (SAWIRRO) – Bulshoweyn Media Network
R/Wasaare Khayre oo kormeeray Xabsiga Dhexe ee Xamar (SAWIRRO)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa kormeer shaqo ku tagey gelinkii daMbe ee maanta Xabsiga dhexe ee Xamar, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen Wasiir kuxigeenka Caddaaladda iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa uga tacsiyeeyey Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed iyo eheladii uu ka baxay askarigii isku dhigay qaraxii dhawaan ka dhacay xabsiga ee uu soo maleegay ruux naftii halige ah.
Ra’iisul Wasaaraha, ayaa askarigaasi ku tilmaamay inuu ahaa halyey ka baxay guud ahaan Qaranka Soomaaliyeed, isla-markaana aan la ilaawi doonin.
“Waxaan Tacsi u dirayaa Ciidanka Asluubta iyo ehelkii uu ka baxay askarigii naftiisa u huray badbaadinta sharafka iyo karaamada ummada Soomaaliyeed. Askarigaas wuxuu na tusay macnaha ay leedahay qaranimadu, taas oo nagu dhiira-gelinaysa kuligeen inaan u istaagno difaaca dalkeena hooyo.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ay yihiin kuwa u diyaarsan dhaqan celinta maxaabiista iyo ku hagidda sharciga. Isagoo cadeeyey in taas badelkeeda aan la aqbali Karin in wax yaabo sharci daro ah oo qal-qal gelinaya amniga xabsiga laga dhex sameeyo.
Khayre oo kormeer ku sameynayay qaar ka mid ah goobaha ay maxaabiistu ku sameeyaan agabyada kala duwan ee xafiisyada ayaa yiri: “Maadaama dib loo hawlgeliyay hawlihii kala duwanaa ee Taliska Ciidanka Asluubta, sida samaynta qalabka guryaha iyo xafiisyada la dhigto, tolidda dharka kala duwan ee dugsiyada iyo ciidamada, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiirageliyo wax soo saarka dalka.”
Rapper K’Naan has faced backlash over the pilot of his HBO Show Mogadishu, Minnesota
Copyright © 2007 - 2018 | Bulshoweyn Media Network